को हुन् सिकागोमा 'प्रेसिडेन्सियल भोलेन्टियर अवार्ड' प्राप्त गर्ने जोशी ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
को हुन् सिकागोमा 'प्रेसिडेन्सियल भोलेन्टियर अवार्ड' प्राप्त गर्ने जोशी ?
नेपालमा शिक्षाको ज्योति छर्ने जय पृथ्बी बहादुर सिंहको जन्म जिल्ला बझांगमा आज भन्दा ८१ बर्ष पहिले जन्मिएका प्रोडा तुलसी जोशी अर्को एक शैक्षिक क्षेत्रका तारा हुन्। बझाँग जिल्लाको भोपुरको सत्यवती माबिबाट स्कूलीय शिक्षा प्राप्त गरी काठमाडौँका त्रिचन्द्र कलेजबाट नेपाली र भूगोल बिषयमा स्नातक गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उदेश्यले अमेरिकाको हवाई युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न आज भन्दा ५४ बर्ष पहिले अमेरिका टेकेका डा जोशीसंग डिसी नेपाल प्रतिनिधिले छोटो फोन बार्ता गरेको थियो।
लामो समय समाज सेवाका साथै आफ्नो अध्यापन कार्य पश्चात अहिले डा जोशी पश्चिम भर्जिनियाको फेयरमाउन्टमा रहदै आएका छन्। तपाईको दिन चर्या कसरी चलेको छ भन्दा डा जोशीको जवाफ छ “ अहिले आरामसाथ बसेको छु , धेरै बर्ष समाज सेबामा लागें। यहाँ पनि ए एन ए मार्फत धेरैलाई सहयोग गरेको छु, अक्षय कोष स्थापना गरेको छु। नेपालका ४० जना जति बिध्यार्थीहरूलाई अमेरिकाको बिश्वविद्यालयमा अध्ययनको लागि अवसर दिए। मैले स्पोनसर गरेका धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पनि डिसी तिर छन्। डा जोशीसँग डिसी नेपालका प्रतिनिधिले नेपाली नेशनल कन्भेनसन सिकागोमा समेत सम्पर्क गर्ने अबसर पाएको थियो। त्यहीको छोटो भेट र फोनबाट भएका संवादका आधारमा लिइएका बिचारहरू यहाँ समेटिएका छन्।
सिकागोमा भएको नेपाली कन्भेन्सनमा डा जोशीलाई नेपालका पूर्ब प्रधान मन्री माधब कुमार नेपालबाट “ प्रेसिडेन्सियल भोलेन्टियर अवार्ड “ प्रदान गरिएको थियो। सो पुरस्कार उनले नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरे बापत प्रदान गरिएको आयोजकहरूको भनाई छ।
एएनए , एन्मामा समेत आजीबन सदस्य रहेका डा जोशीले पाएको प्रमाण पत्र हाल अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमबाट हस्ताक्षर गरिएको छ।
पश्चिम भर्जिनियाका ३ वटा गभर्नरहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेबापत अवार्ड प्राप्त गर्न सफल जोशी साच्चैका शैक्षिक दूत नै रहेको भान हुन्छ। शिक्षाको बिकासबाट मात्रै देशको बिकास हुन्छ भन्ने डा जोशीले आफ्नो जिल्लामा धेरैवटा स्कूलमा अक्ष्यय कोष स्थापना गरेको , बुबा आमा को नाममा अक्ष्यय कोष स्थापना गरेको बताउँछन्। तपाईलाई समाज सेबामा लाग्न कुन कुराले प्रेरित गर्यो भन्ने प्रश्नमा “ मलाई भानु भक्तको घासीले बढी प्रभाब पार्यो, आखिर मानिस मरणशील प्राणी हो बाचिरहने बस्तु ता उसले बाच्दाका बखत गरेका असल काम मात्रै हो। सोही अबसरमा डा जोशीले नेपालका सुपरस्टार नायक भुबन के सीलाई NEMPA popular film अवार्ड समेत प्रदान गरेका थिए।
साथै डा जोशीले २०१५ मा एशोसियसन अफ अमेरिकन जोग्राफरले मान्सता दिएको थियो, यो सस्था भूगोल बिषयको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जुन अवार्ड अहिलेसम्म नेपालीहरूले प्राप्त गरेको छैन। अमेरिकामा स्थापना भएको पहिलो सस्था ए एन ए मा १९८३ सालमा नै आबद्द डा जोशी “ अमेरिका भरी रहेका नेपालीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाध्नका लागि ए एन ए स्थापना भएको र यसैको उदेश्य पुरा गर्नको लागि एन इ सि सि दर्ता गरिएको बताउँछन्। एनइसिसिले शिक्षाको क्षेत्रमा खासै काम गर्न नसके पनि कल्चरको रूपमा धेरै काम गरेको उनको भनाई छ।
लामो समयको प्राध्यपन जीबनबाट अहिले बिश्राम लिएका जोशी अब पनि आफूलाई समाज सेवामै लाग्ने बताउछन्। हामीले नेपाल र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई साथ र सहयोग दिदै नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा सबैको सहयोग हुनु जरूरी भएको ठान्छन्।
नोट : डिसी नेपालले उनको सांगोपागो जीवनी छिट्टै ल्याउदै छ प्रतीक्षा गर्नु होला ।